Ziyini Izinhloso ZeBandla LikaNkulunkulu USomandla? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
IBandla likaNkulunkulu uSomandla linisela futhi lalusa abakholwa kulo ngokuvumelana okuphelele namazwi kaNkulunkulu aseBhayibhelini kanye Izwi Livela Lisenyameni elikhulunywa uNkulunkulu uSomandla, ukuze wonke amakholwa, ngaphansi kokuqondiswa, ukunakekelwa, ukuniselwa, nokwaluswa amazwi kaNkulunkulu uSomandla, bakwazi ukuqonda wonke amaqiniso emazwini kaNkulunkulu, baphile ngendlela efanele, baphishekele imigomo efanele, balandele indlela kaNkulunkulu, babambelele emiyalweni kaNkulunkulu, bakhazimulise uNkulunkulu ngokuba ukukhanya nosawoti wezwe, badunyiswe uNkulunkulu, futhi kuthiwe bayakufanelekela ukuthola izibusiso zikaNkulunkulu.
Ibandla lihlose ukwakha ibandla elifuna inhliziyo kaNkulunkulu, ukuze amakholwa akwazi ukukhonza nokunakekela omunye nomunye ngamazwi kaNkulunkulu nangothando lukaNkulunkulu, alalele futhi akhonze uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, nazoba ubufakazi bangempela kuNkulunkulu futhi abonakalise inkazimulo kaNkulunkulu.
Ibandla lihlose ukusakaza nokufakaza ngevangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla, okuvumela abantu bakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu yezinsuku zokugcina ebuyile, nokuthi uye wenza umsebenzi “ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu” (1 kaPetru 4:17) okuprofethwe ngawo eBhayibhelini, okungumsebenzi kaNkulunkulu ngokukhethekile wokuhlanza nokusindisa abantu ngokuphelele ezinsukwini zokugcina. Ukwamukela wonke amaqiniso akhulunywe uNkulunkulu uSomandla kuphela okuzokwenza abantu bakwazi ukususa isimo sobusathane esikubo, bakhululeke ebugqilini besono, bahlanzwe, bazi uNkulunkulu, balalele uNkulunkulu, futhi bakhonze uNkulunkulu, baphile ukuphila okunenjongo, futhi basinde ezinhlekeleleni ezinkulu zezinsuku zokugcina futhi bangene umbusweni kaNkulunkulu—leli ukuphela kwekusasa lesintu eliqhakazile. Ukusakaza nokufakaza nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina, ngaleyo ndlela ukuletha phambi kukaNkulunkulu bonke lapho abamukela ubukhona bukaNkulunkulu nabathanda iqiniso ukuze bamukele futhi bathole insindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina—lona umyalo kaNkulunkulu ebantwini Bakhe abakhethiweyo, nezinhloso zeBandla likaNkulunkulu uSomandla.
Okwedlule： Uyini Umehluko Phakathi KobuKristu NeBandla LikaNkulunkulu USomandla?
Okulandelayo： Izinkolelo Eziyisisekelo ZeBandla LikaNkulunkulu USomandla
(1) Izimiso ZeBandla LikaNkulunkulu USomandla Izimiso zeBandla likaNkulunkulu uSomandla zisekelwe eBhayibhelini, futhi izimiso zeBandla likaNkulunkulu…
Abantu abaningi abaqondi ukuthi kungani, ngoba uNkulunkulu uSomandla uwukubuya kweNkosi uJesu ezinsukwini zokugcina, iNkosi uJesu ibizwa ngokuthi uNku…
Lapho isintu sonakaliswa uSathane, uNkulunkulu waqala uhlelo Lwakhe lokuphatha ukuze kusindiswe isintu. UNkulunkulu wenze izigaba ezintathu zomsebenzi…
UbuKristu neBandla likaNkulunkulu uSomandla bakholelwa kuNkulunkulu ofanayo. Abantu abawuqondayo umlando wenkolo bayazi ukuthi ubuJuda kwa-Israyeli ba…